LibreOffice 5.0 dị | Site na Linux
LibreOffice 5.0 dị
Gbaa ndị nzuzu !! LibreOffice mbipute 5.0 dị ugbu a site na njirimara ọhụụ na - atọ ụtọ n’ọdịdị interface na arụmọrụ.
1 Ihe dị ọhụrụ na LibreOffice 5.0
1.1 Onye edemede
2 Ntinye LibreOffice 5.0
Ihe dị ọhụrụ na LibreOffice 5.0
Mgbanwe ndị ahụ ha ezuru na i nwere ike ịhụ ha na ntọhapụ ndetu nke a version. Na ọkwa interface, akara ngosi ka mma, ụfọdụ ihe ndị dị na ogwe ngwaọrụ ka emezigharị ma tinye ya ọzọ. Ka anyị leba anya na ole na ole bara uru ịkọwapụta n'okpuru mkpuchi.
Onye edemede na-agbakwụnye Nkwado iji dochie Emoji na n'ime okwu
Styles preview na sidebar
Nkwado maka ederede ederede na Okwu
Ọrụ emelitere na tebụl ...
na ndị ọzọ ..
XSLX usoro ndozi
Bee, gbanwee ma chekwaa ihe onyonyo ndị etinyere na ibe akwụkwọ.
Ndozi na oru nke ahịrị na ogidi.
Ngwaọrụ ndị ọzọ nwetakwara mmelite ha na mmezi ahụhụ, enwere mmụba na nzacha na arụmọrụ izugbe nke ụlọ ọrụ.
Ntinye LibreOffice 5.0
N'ihe banyere Ubuntu na nkwekọrịta, RedHat, Windows na OSX, ha nwere ike iji ya ibe nbudata iji nweta mbipute kachasị ọhụrụ. Maka Ubuntu ana m ahapụ njikọ ndị a:
Nchịkọta enyemaka ndị na-anọghị n'ịntanetị
Ozugbo anyị na-ebudata faịlụ ahụ, anyị na-emeghe ha, tinye nchekwa ndị aha ya bụ DEB ma mechie ọnụ ya:
Anyị na-eme nke ahụ maka folda ọ bụla enweghịzi. Ọ dịghị mkpa iwepu ụdị nke LibreOffice ọ bụla gara aga, mana a ga-atụ aro ka ị zere esemokwu ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LibreOffice 5.0 dị
Enwekwara ebe nchekwa gọọmentị nke na-eme ka libreoffice dị ọhụrụ:
sudo apt-nweta wụnye libreoffice
N'ezie m emelitere taa wee lelee ọkwa mwepụta. Na-ama oke.
Mara: site na nchekwa, Libreoffice jikọtara ya na ịdị n'otu.
Zaghachi Domingo Gómez
Ebe ọ bụ na Linux mint nwalere ọ na-arụ ọrụ ahụrụ m n'anya otú ọ dị.
Site na Debian na-eburu gị azụ, ọ dị mma.
ezigbo onyinye, na-arụ ọrụ 100%
Ezi! Cheregodi amaghị ihe m, kedu ka m ga esi esi melite ụdị a, enwere m 4.2.xx m nọ na Xubuntu 14.04
Zaghachi Hugo Sánchez Landaverde
gbakwunye ppa ma ọ bụ budata faịlụ ndị enyere nke ahụ wee mepee folda nbudata na njedebe ma tinye ihe ndị a:
o doro anya na ị ga-enwerịrị naanị nchịkọta 3 ụgwọ na folda nbudata ma ọ bụghị na a ga-etinye ndị ọzọ.
Ọ na-abịa na akara ngosi monochrome site na ndabara ma ọ bụ ị setịpụrụ ha. Ekwenyeghị m na akụkụ ahụ, eziokwu bụ nke m na-eji mana ọ dị ka ihe jọgburu onwe ya. N'agbanyeghị nke ahụ, mmelite ahụ dị ọtụtụ ma arụ ọrụ ndị otu a nwere ekele. Daalụ.
A na-emechi akụkụ akụkụ site na ịpị "menu n'akụkụ" menu ndọpụta na ịpị "n'akụkụ akụkụ mmanya".
Ha agbanwebeghị GUI, echere m na ọ bụ oge….
na calligraph ... ọ nwụọlarị: tie mkpu
Zaghachi Cristian Cornejo
Ihe onyonyo nke Javier Armas dijo
Ọmarịcha. Aga m echere ya ka ọ pụta dị ka mmelite na Kubuntu 15 ka ọ ghara imebi ihe ọ bụla 😛 (M na-eji Libreoffice mee akwụkwọ na pdf). Ọ bụrụ na enweghị m ike iguzo ya, aga m alaghachi na post a (yana ihe ị kwuru) iji nwalee ọdịmma m.
Zaghachi Javier Armas
Eziokwu bu, M ugbua jiri Debian Testing na enwere m afọ ojuju na ụdị nke enyere site na nkwụghachi, mana enwere ekele maka ozi ọma ahụ.
Ebe ọ bụ na m na-agụ "n'Ubi oyiyi", M na-emelitere ozugbo, Daalụ maka post!
Aghọtaghị m otu ndị mmepe LibreOffice. Have ga-ahụ ihe ha chọrọ ... Enyebeghị m onwe m ọrụ nke ịhụ ọnọdụ akụrụngwa ugbu a. Mana, ha kwesiri ime nyocha dị mfe:
- Kedu ụlọ ọrụ kachasị arụ ọrụ? Si ebe ahụ, malite ma "jidere" ihe kachasị mma ma mejuputa ya.
- Ikekwe anyị kwesịkwara ilekwasị anya n'ụzọ dị iche iche a na-eme ihe, ọ bụghị oke obi ike, ka ị ghara ịtụ onye ọrụ njedebe ahụ ụjọ mana, na-agbanwe ihe ọhụụ ruo n'ókè ụfọdụ, ya bụ, na-ejigide ngwa ọrụ dị mfe ma dịkwa mfe.
PS: Edemede "anyi kwesiri" nihi na abum onye mmemme ma nke ahu adighi ewepu ndi oru LO.
Zaghachi Kalt Wulx
Ebe ọ bụ na ha gbakwunyere nhọrọ iji belata ihe oyiyi ahụ, ha gaara agbakwunye otu oge nhọrọ iji gbanwee onyinyo ahụ n'akụkụ ọ bụla ma ọ bụghị naanị 90 Celsius dị ka nke a ugbu a na nhọrọ iji gbanwee ókè nke ihe oyiyi site na square ruo gburugburu, elliptical ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na ha ga-abịa na nsụgharị ọzọ.
Zaghachi Obed Gonzalez
I meela nke ukwuu daalụ. Ule ndozi otú o si arụ ọrụ.
Emelitere m ma ugbu a, ọ na-enye m njehie 509 na usoro m (Basic)
Ihe Nlereanya: «= G3 / 1.9»
na TOOODAS usoro m.
Ana m aza onwe m.
M laghachiri ma dozie ya.
Echere m na ọ na-amalite ngwa ngwa karịa 4!
Eji m ike megharia ya na Funtoo site na imeghari ebuild, ma odi nma 😀
Nwachukwu 697 dijo
Ọfọn maka ụlọ ọrụ na-enweghị atụ akara ngosi ikuku pụrụ iche agaghị ekwe omume ...
O yikwara ka ọ "buru ibu" maka obere ijiri m.
na Abiword anaghị adabakọ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe na faịlụ ahụ (ọ na-agbanwekwa ebe m mgbe m mepere Abiword na Libreoffice)
N'ụzọ dị ịtụnanya, m na-eji "WPS Office" Chinese "arụ ọrụ ọfụma, ọ na-emepe ngwa ngwa mana amaghị m ihe na - eme na enweghị m ike ịchekwa na .odt!
«Oscar» Ikwu 22
Aghọtara m na wps adabaghị na odt, ọ naghịkwa akpali m inwe obi ike na mgbe ị mepere mmemme ahụ ọ na-eziga gị na peeji nke gọọmentị ya. Mmemme ndị ọzọ niile, ọ nweghị onye zitere gị na ibe ha belụsọ na ọ bụ ngwaahịa dị n'igwe ojii ma ọ bụ n'ọfịs ma ọ bụ abiword ma ọ bụ n'efu ma ọ bụ ibm (Ọ dị ndụ ???)
Na nkenke, uche m bụ na maka ntọala n'efu ọ dị arọ ma abiword bụ ma eleghị anya oke oke maka okwu mana ọ bụghị Gnumeric ...
N'ihi ya, m ghọtara mmetụta gị…. mana WPS na-ala azụ iji ya. Tụlee otu faịlụ na libre / office / WPS ị ga-ahụ ihe dị iche ọbụlagodi na ọ bụ odt ma ọ bụ ụlọ ọrụ!
Ndị Fran dijo
Dị nnọọ arụnyere na Kubuntu 14.04. Ugbu a, ana m eji ya iji gaa n'ihu ọrụ PF. N'ezie, a na-edozi nsogbu ebighi ebi na ndepụta damn.
PS: ndo maka nsogbu ahụ, mana ọ dị onye maara otu obodo na-arụ ọrụ na ngwanrọ injinia njikwa? Cheers
Zaghachi El Fran
digo HDz dijo
Ọ dị mma ịmara na ọrụ a na-aga n'ihu. M na-eji ya na linux na windo na ebe ahụ enwere m ike ịchọta ọrụ niile m chọrọ na ọrụ m kwa ụbọchị na nnukwu ịmara na ọ na-aga n'ihu.
Zaghachi diego Hdz
Enweghị m ike ịlele ihe ngosi emere na ike ma ọ bụ na-atọ ụtọ. ihe omume emechi na file mgbake amalite. nke a na zorin 9.
Zaghachi ka fanon
Ọ bụ mmechuihu na iche echiche karịa banyere eziokwu ahụ bụ na achọrọ m ndị enyi m ịkwaga n'ụlọ ọrụ a.
Esi gbanwee faịlụ faịlụ site na "/" ma ghara ịnwụ ịnwa